Lahaanshaha isku dhow aragti sida in WMP Player Media Classic waa doorashada kaliya ee u isticmaala in la sameeyo geeddi socodka loo maqli karo la xiriira fududahay in la raaco oo la hirgeliyo. Ka dib markii qaar ka mid ah dib u eegista in ay yihiin xusid mudan. Complete faquuqid A ayaa lagu samayn in uu oggolaan in user in ay go'aan ka gaarto haddii aan barnaamijka waa in lagu xiro. Qaybta ugu danbaysa ayaa lala xiriirinayaa oo kale hogaanka in user a raaxaysan kartaa in la xiriira barnaamijka. Windows iyo OS Mac Labada lagu beegsaday inay soo bandhigaan kale oo ah.
Part1: Top 5 dib u eegista wanaagsan ka baraha warbaahinta
Part2: Top 5 dib u eegista ka users
Part3: Top 5 dib u eegista xun ee ciyaaryahan Media classic
Part4: Top 5 dib u eegista user xun
Part5: Top 5 Media Player kale oo Classic daaqado
Part6: Top 5 Media Player kale oo Classic u Mac
Macluumaad Technical of Media ciyaaryahan Classic
Ka dib waxaa ka mid ah info casriga ah ciyaaryahanka in uu noqon doono taageero marka ay timaado soo saari xallinta hab te ugu fiican:
Player Ayaa la soo saaray oo ay ku Gabest iyo caddibaadda users 9 forum ee sanadka 2003
Af barnaamijyada in badan ayaa la isticmaalay si loo horumariyo ciyaaryahanka waa C ++ oo dhan ku dhiirigelinayaan in la xiriira xallin kartaan arrimaha on iyaga u gaar ah.
Download size ciyaaryahan ayaa 10.7 MB waa mid ka mid ah ciyaartoyda light aalladda dunida samaynta.
Sanadkii 2015 arkay ay sii daayo deggan hore iyo 5-tii October 2015 daayo deggan hore ee ciyaaryahanka ayaa lagu bilaabay.
Ciyaaryahanka socota oo dhan ee sharciyada iyo qaynuunka GNU ah sida License Public guud.
Taageerada madal ee ciyaaryahanka ka mid ah IA-32 iyo x86-64 taasoo ka dhigan in labada OS 32 iyo 64 yara taageeri karaan barnaamijka aan arin kasta.
Ciyaaryahanka ayaa lagu heli karaa 31 luqadood.
Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 dib u eegista barnaamijka si caddeynayaa in user helo aragti ah:
Posted by: Tech rugta
Content: Tani waxay dib u eegis aadka u wanaagsan dhigayaa in taageero video ah Warbaahinta Player classic waa mid ka mid ah ugu wanaagsan oo aan sidaa u heer sare ah waxaa lagu talinayaa in downloads.
Content: In ay mid ka mid ah website-yada ugu caansan dunida u eegista dhigayaa in classic ciyaaryahan warbaahinta ayaa si weyn lagu talinayaa in kuwa isticmaala kuwaas oo raadinaya ciyaaryahan xor ah oo wax ku ool ah.
Content: Goobta uu dhigayaa in ciyaaryahanka uu yahay mid ka fog badan soo jiidasho leh marka la barbar dhigo ka dhisay ciyaaryahan daaqadaha sida uu hubiyaa in ugu sareeya iyo gobolka functionalities tahay waxaa lagu sameeyey aasaasiga ah oo la fahmi karo.
Posted by: il Open
Content: The interface shineemo guriga iyo saldhig user ayaa lagu beegsaday oo waxaa ku xusan in barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in interface waxaa si fudud loo isticmaalo.
Posted by: codecs Free
Content: Aruurinta dib u eegista on this site caddeynaya user helo ciyaaryahan ganaax ku rakiban oo buuxiya shuruudaha.
Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 dib u eegista posted by users ah:
Content: aragtida ugu sareysa ee URL hoos ku xusan waa in la tixgeliyo oo la posted by ZONI oo dhigaya in MPC waa ciyaaryahan weyn video in si weyn lagu talinayaa.
Posted by: Ka dib markii Dawn
Content: Under tab ee dib u eegista dib u eegista uu soo posted by dikbozo waa in la tixgeliyo oo dhigaya in barnaamijka shiidaa taageertaa kasta iyo qaab kasta oo user xitaa ka fikiri karaa hab hooyo.
Content: Scroll bogga si aad u aragto oo dhan dib u eegista ay hoos. Mid posted by SNARK44 waa in la tixgeliyo. Dib u eegista waxa uu dhigayaa in ciyaaryahanka uu yahay mid si fudud loo isticmaali wuuna qotomiyey. Ma jiro wax ka taro ku xusan.
Content: dib u eegista user waxaa lagu akhrisan kartaa dhammaadka bogga taas oo dhigayaa in ciyaaryahanka uu yahay mid fudud iyo sidoo kale taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab.
Posted by: Download Chip
Content: The user on this page ayaa sheegay in barnaamijka uu yahay mid yar oo cabbirka iyo hubiyaa in natiijada loo baahan yahay waxaa lagu bixiyaa iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 dib u eegista xun ee ciyaaryahan Media classic in ay isbedeli karaan fikirka dadka isticmaala ay:
Posted by: saartay kabo
Content: Goobta dhigayaa in taageero USB ah ciyaaryahanka ugu waa weyn ee ay ka taro sida ay daaha ka qaadi doonaan PC in uu fayrusyada iyo hanjabaado kale haddii drive uusan ka tirsan user.
Content: Boggan ayaa ku eedeeyay ciyaaryahan ee 9 sano jir ah ay interface iyo dadka isticmaala ay sidoo kale kula taliyay in ay soo bixi nooca ugu dambeeya in uu yahay xoogaa ka wanaagsan.
Content: goobta ayaa sheegay in user helo interface ah oo la mid ah dabeecadda iyo noocaas ah ayaa aad u weyn oo la soo saaro oo dhan.
Content: Inkastoo ay tahay bog download laakiin weli macluumaadka ayaa la siiyey user ee foomka of dib u eegis oo sheegay in version hore ee ciyaaryahanka daaqadaha 6.2 wuxuu ahaa sida la mid ah tan oo kale.
Posted by: Isticmaal
Content: goobta ayaa sheegay in ay kor u DHCP si weyn mar barnaamijka la soo bixi oo sidaas daraaddeed waa xaalada ugu xun ayaa la soo sheegay.
Hoos waxaa ku qoran liiska uu soo diyaarisey:
Content: The dib u eegis ugu horeysay posted by Jeff K dhigayaa in ciyaaryahanka uu leeyahay laba ka mid ah arrimaha sida version waa weyn iyo interface ma joogo oo dhan soo jiidata dadka isticmaala ee dhan.
Content: Dib u eegista uu soo posted by Rob VG dhigayaa in X9 toos ah ayaa lagu rakibay la ciyaaryahan oo ka dhigaysa in ay gabal aad u baahnayn barnaamijka jidka oo dhan.
Content: Dib u eegista uu soo posted by Ah Saha waxa Aannu ku yaal bogga soo sheegayaa in maqaarka ee ciyaaryahanka waa uu waqtigiisu dhamaaday iyo ka dib ka mid ah horumarinta waa in la casriyeeyay si dhab ah
Content: Dib u eegista uu soo posted by IutPqyTpvzHnM si cad u muujinaysaa in user ku faraxsaneyn farsamooyinka dhacsan loo isticmaalay si loo horumariyo muuqaalka guud ee ciyaaryahanka.
Posted by: files freeware
Content: dib u eegista ay ku user saxe dhigayaa in ciyaaryahanka laftiisa uninstalls taas oo ah fikrad ugu wareerka badan in iman kara guud ahaan user a.
Hoos waxaa ku qoran shanta kale oo ka mid ah ciyaaryahankii Media classic si ay u sameeyaan qaarkood in technology dhacsan waxaa lagu daadiyaa:
Ciyaaryahanka ayaa la soo saaray hayo in aragtida teknoolajiyada sare.
Interface guud waa muhiim in ciyaaryahanka uu ku yeelan karo si ay u sameeyaan habka loo maqli karo ugu fudud.
2. MPC NOQON
Ciyaaryahanka waa mid fudud oo si sahlan loo isticmaali in user a marna ku xayiran arrintan la xiriira
Ciyaaryahanka u ciyaara walba ama qaab tuuro, waxa uu taas oo macnaheedu yahay taageero ballaaran format
Marka laga reebo qaabab video waxa ay sidoo kale taageertaa kala duwan oo fara badan oo qaabab audio
Guud ahaan Arrintan waxa taageeray state of design tahay kaas oo sidoo kale soo jiidasho leh.
4. M ciyaaryahan WW
Qorshahaa waxa xirfadeed ee ciyaaryahanka waa habka ugu fudud in la sameeyo shaqo ciyaaryahanka
Guud ahaan design ciyaaryahanka waa mid aad u mashquuliya iyo fududahay in la isticmaalo iyo shaqeeyaan.
Ciyaaryahanka 5. QQ
Ciyaaryahanka ayaa si gaar ah loogu talagalay daaqadaha hayo in view oo dhan baahida OS ah.
Heerka multimedia waa ka dheeraa midka kale ku jira liiska, kuwaas oo in erayada fudud macnaheedu HD iyo taageero 4K.
Ka dib waa sareysa 5 kale oo ah ciyaaryahan Media classic u Mac.
Waa ciyaartoydii ugu xirfada waa u fududahay in la isticmaalo dayactirka heer sare ah oo tayo leh loo maqli karo.
Wax soo saarka guud ee ciyaaryahanka ugu fiican yahay iyo natiijada ay tahay mid laga cabsado ee la xiriirta taageerada qaabka iyo ciyaaraha.
Sida ay u ekaan ciyaaryahan Quicktime si isticmaalka uu noqonayaa mid fudud ee dhammaan dadka isticmaala ku habboon.
Ciyaaryahanka ayaa loogu talagalay in lagu xaliyo inta badan ka mid ah dhibaatooyinka loo maqli karo la xiriira.
Guud ahaan taageerada macaamiisha waa mid aad u adkeysi iyo taageero. Waxaa halkaas 24/7 si uu u hago isticmaala.
3. ciyaaryahan Real
Interface madoobaa ee ciyaaryahankaan caan ku yahay sare ee oo dhan taas oo ka dhigaysa in ay aad u soo jiidasho leh sida mawduucyada mugdi ku jira suuqa hadda.
The functionalities guud ahaan waxaa loo dhisay si ay u taageeraan loo maqli karo ee waafaqsan in uu mar walba jeclaa by users ah.
Ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee uu leeyahay technology daruur taas oo macnaheedu yahay in user ka dhigi kara isticmaalka buuxa ee ciyaaryahanka aan khatar kasta oo ah lumitaanka xogta.
4. ciyaaryahan Nice
Ciyaaryahanka ku jira line shuruudaha user waxaa mid ka mid ah doorashooyinka oo kaliya in user a wajihi karo samaynta.
Taageero macaamiisha waa mid laga cabsado oo ka jawaaba dhammaan arrimaha waqtigii si aad u hesho dareento in ay daryeel badan.
Sida magacaba ka gaysteen ciyaaryahanka waa mid aad u fiican in lagu xalinayaa sida waxa ay taasi ugu wanaagsan ee reer loo maqli karo ee jira iyadoo la kordhinayo tayada si toos ah.
5. 5K ciyaaryahan
Ciyaaryahanka ayaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo hab gui ah si ay ugu sahlanaato in ay isticmaalaan.
Ciyaaryahanka taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab si ay ugu sahlanaato inay ku ciyaaraan dhawaad ​​qaab tuuro, waxa uu.
Ciyaaryahanka ayaa waxa uu leeyahay tiro badan oo ay tahay software kaliya ee la Faraq aad u yar u dhexeeya laga furayey.
Iyada oo ku saleysan dib u eegista ciyaaryahanka classic Media waxay noqon kartaa wanaagsan ah iyo sidoo kale doorashada xun ku xiran tahay kooxda user uu u dooranayo. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda in ay u suurta tiro badan oo ah dadka isticmaala si ay uga bixi lahaayeen dhibaatooyinka la xiriira ku playbacks of qaabab kala duwan. Haddii weli ay jirto arin la barnaamijka ka dibna waxa ay heer sare waxaa lagu talinayaa in user fiiriyaa waa u bedela si rakibo unsurpassed la sameeyo hab wanaagsan ee lagu raaxaysan karaa. Muuqashada oo quruxsan oo waxay ku naqshado ah ciyaartoyda in lagu xusay in liiska kor ku xusan hubaal ka dhigi lahaa doorasho adag tahay user.
Top ciyaaryahanka 30 FLAC daaqado / Mac / macruufka / android
> Resource > Top List > Top ciyaaryahanka 20 warbaahinta u eegista classic iyo waxyaabaha kale ee